Dowlad Goboleedyada Oo Dowladda Uga Digay Iney Dadka Reer Kuunfur Galbeed Ka dhex Abuurto Dagaal Sokeeye – Kalfadhi
Golaha Iskaashiga Dowlad Gobleedyada ayaa, shir ay ku sheegeen inuu ahaa degdeg oo ay galeen kadib, waxay soo saareen war-murtiyeed ay ku qoran tahay 8 qodob, oo u badan dhaliil ka dhan ah Dowladda Federalka, taas oo ay ku eedeynayaan in ay fara-gelin qaawan ku hayso Doorashada Koofur Galbeed. Waxay sheegeen in ku dhawaad 100 Xildhibaan, oo ka tirsan Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed, ay dowladdu ku hayso Muqdisho, kuwaas, oo sida ku qoran war-murtiyeedkooda, ay siineyso lacag, si ay ugu codeeyaan, waxay ugu yeereen, “Musharraxa Dowladda”.
Dowlad Goboleedyadu waxay sheegayaan iney taasi meesha ka saareyso iney dadka Koofur Galbeed si Xor iyo Xalaal ah u soo doortaan hogaamiyahooda. Waxay warkooda ku dhex yiraahdeen “Madaxweynaha iyo Reysal Wasaaraha ayaa qaadan doona wixii cawaawib xuma ah ee ka dhasha Doorashada 17-ka Nofeembar ka dhici doonta Koofur Galbeed”. Waxay, sidoo kale, sheegeen ineysan daka Koofur Galbeed aqoonsan doonin Doorasho kasta, oo ka dhacda deegaankooda oo, sida ay sheegeen, aan loo marin hanaanka u degsan Doorashada.
Warkooda waxa uu muujinayaa dhiilo iyo baqdin ay ka qabaan in fara-gelinta, ay ku eedeynayaan Dowladda Federalka, ay sababi doonto inuu dadka Koofur Galbed ka dhex bilowdo dagaal qabyaalad ku saleysan oo, sida ay shegayaan, ka imaaneysa kala qeybin ay tilmaameen iney Dowladda Federalku ku sameeneyso Dadka, Baarlamaanka iyo Xukumadda Koofur Galbeed, taas oo ay sheegayaan iney masuuliyaddeeda qaadan doonto Dowladda Federalka ah.
Cambaareyntooda ka dhanka ah Dowladda Federalka kasakow, waxay Filla Soomaaliya ku eedeynayaan iney dooneyso in ay burburiso Nidaamka Federalka ah, ayna dooneyso in ay dalka dib ugu celiso Nidaamkii Kaligii-Taliska ahaa. “Wuxuu Goluhu marar badan ka digay, haddana caddaatay qorshaha Dowladda Dhexe, oo ay ka go’an tahay in ay burburiyaan Nidaamka Federalka ah” ayey ku yiraahdeen war-murtiyeedkooda.
Shacabka iyo Beesha Caalamka ayey ugu baaqeen iney dalka ka badbaadiyaan dagaal sokeeye, oo ay sheegayaan iney ka dhalan karto hab dhaqanka siyaasadeed ee Dowladda Federalka, waxaana baaqoodaas iyo walaaca ay muujinayaan ay culeys ku darayaan iscasillaaddii Guddiga Doorashooyinka Koofur Galbeed, oo ay soo dhaweeyeen, iyo werwerkii uu Golaha Aqalka Sare horay uga qabay in la fara-gelinayo Doorashada Koofur Galbeed.